Ityala elincomekileyo le-BOOX Nova3 umbala weNova 3 Nova 2 7.8 intshi enesiphatho somnini wepensile yomvelisi kunye noMvelisi | Abahambahambayo
Ukuma kwetyala lesikhumba
Eli tyala lidibanisa umtya wesandla, umnini wepensile kunye nokuma ukukhaba. Itibamba isithethi sakho sime ngokuzinzileyo. Sikhulule isandla sakho xa ufunda, kunye nokuselaing ikofu. Ipenisi yokubamba iphethe usiba lwakho xa ungayisebenzisi.
Uyilo lomtya wesandla
WIbhanti e-elastic ikhululekile kwaye ilungele eyakho kunye nezinye izandla.
Khulula isandla sakho .Ukuma kokukhaba, wena ereader ume ngokuqinileyo etafileni, naphina ekhaya, elayibrari, ikhefi okanye ngaphandle. Ungakonwabela ukufunda kunye nekofu kunye nesiselo.
Umnini wepensile owakhelweyo
Ukuphulukana nepeni yakho. Yongeza umnini wepensile ecaleni. Unokubeka ipeni yakho kuyo, don’Ungakhathazeki ukuba ulahlekile.
Ukulala ngokuzenzekelayo kwaye uvuke
Konwabele ukufunda okungapheliyo. Eli tyala lesikhumba lixhasa ukulala ngokuzenzekelayo kunye nomsebenzi wokuvuka. Xa uza kuhamba okanye ulale, vala isiciko ukuze ugqibe ukufunda. Xa ufuna ukufunda, vula kwaye uqalise ukufunda.
Imvakalelo efanelekileyo yokubamba
Izinto zokuqala zesikhumba zineemvakalelo zokucofa. IIkwanakho ukukhusela umfundi wakho ixesha elide. I-microfiber yangaphakathi ethambileyo ayifakwanga, ehambelana nombala omnyama.
Gquba ngokupheleleyo icala lakho lokufunda. Gcina i-ereader yakho ikhuselekile xa ikhutshiwe ngexesha lemikrwelo yemihla ngemihla, ukwehla kancinci kunye nokuqhuza.
Eyakhelwe-ngaphakathi umazibuthe onamandla uqinisekise ukuba ityala lakho livalekile. Don’ Ungakhathazeki, i-ereader yakho ayikrwemki ngamaqhosha kunye nenye into ebukhali xa isingxobo sakho kunye nesutikheyisi.
Ukuphakama x Ububanzi x Ubunzulu: 200 mm x 170 mm x 50mm
MOQ: 100PCS / Ubungakanani bombala: 7.8 "
Isiqinisekiso: FCC, ROHS, CE, GS, RECH, Sgs Phawu: ukumelana imikrwelo, shockproof,
Ukupakisha: Ibhokisi lephepha, uyilo lwebhegi yoyilo: ngentambo yesandla, ukukhaba ukuma, kunye nepensile
Intlawulo: 1.T / T 2.Western Union 3. Paypal Logo: Ezishicilelweyo / Yamkela wena
Ixesha lokuhambisa: I-3-5 yeentsuku zokusebenza ze-OEM / i-ODM yoyilo: yamkela uyilo olwenziwe ngokwezifiso
7.8 intshi BOOX nova3 umbala, BOOX nova 3, BOOX nova 2.
Egqithileyo Amaqhosha ajikelezayo ikhibhodi yebluetooth ye-ipad ye-Samsung Lenovo Huawei ithebhulethi enephedi yokuchukumisa
Okulandelayo: Icala lokuchukumisa iphedi ye-iPad 10.2 2020 2019 ye-ipad 8 ipad 7
Yima case yesikhumba for kindle paperwhite 4 10 ...